Imboni yasebusuku kanye ne-COVID zingaba khona ngokubambisana
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Amasiko » Imboni yasebusuku kanye ne-COVID zingaba khona ngokubambisana
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Amasiko • Health News • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • Izindaba • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Spain Izindaba Ezintsha • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Ukulahleka kwezomnotho imboni yasebusuku ebhekene nakho nemiphumela yako ehlobene ngqo nezinye izimboni ezinjengokuvakasha kudale umonakalo omkhulu
2020 ulethe i ukungabi nalwazi okuphelele kanye nokuba sengozini mayelana negciwane eliphenduke ubhubhane, maphakathi nekhulu lama-21
USieXsein Global wazalwa enhlanganweni yomhlaba yamathimba ochwepheshe abanomlando omude emikhakheni yezimboni
Imboni yasebusuku ingaba yisixazululo kulo bhubhane lwamanje ngoba kungaba ngumthombo oyinhloko wokuthola ngokuhlanganyela neziphathimandla ezilawulayo futhi basebenze njengezicishamlilo zokuvikela ukusabalala kwegciwane
Impela ngonyaka owedlule, izindawo zasebusuku emhlabeni wonke zaphoqeleka ukuvala iminyango yazo ngemuva kokusabalala okusheshayo kwe-coronavirus. Akuzange kuthinteke izindawo kuphela kepha eminye yemikhosi yomculo ebaluleke kakhulu efana neCoachella, i-Ultra Music Festival, iTomorrowland Winter ne-Snowbombing ubememezele nokuthi ukuhlehliswa kwalo ukuze kunqandwe lesi sifo.
Ukulahleka kwezomnotho imboni ebhekene nakho nemiphumela yayo ehlobene ngqo nezinye izimboni ezokuvakasha okunje kudale umonakalo omkhulu futhi nosizo olufanele oluceliwe kuhulumeni ngamunye aluzange luzaliseke, kushiye amabhizinisi amaningi eqothukile nemiphumela emibi kwezomnotho, kanye nabasebenzi bemboni iningi labo abashiyiwe belahliwe. Imiphumela yalokhu kuvalwa seyiqala ukunaka ohulumeni kwazise abaningi babhekene nezinkinga ezinkulu kakhulu ngekhulu leminyaka elidlule, okubenza bavuleke ngokwengeziwe ukuqala ukuvuselela umnotho. Kuphephile ukusho ukuthi umnotho wasebusuku udala umthelela omkhulu kwezomnotho emadolobheni nasemazweni emhlabeni jikelele.
Lokho u-2020 asilethele khona kwakungu- ukungabi nalwazi okuphelele kanye nokuba sengozini mayelana negciwane eliphenduke ubhubhane, maphakathi nekhulu lama-21. Kodwa-ke, lezi zikhathi ezivivinyayo zifuna inyunyana eningi kunakuqala futhi zivule iminyango ezikhungweni, ezinhlanganweni, nasezinkampanini, ezizimele nezomphakathi ukuthi zihlanganyele "Funa esivumelana ngakho".
Okuphephile ukusho ukuthi ama-clubbers ahlulekile ukuphuma isikhathi esingaphezu konyaka, okwenza ukuba "babhujiswe yindlala emphakathini" ngokukhethekile ngemuva kokubhekana nemiphumela yokuba wedwa futhi nokuhambisana nemithetho eqinile yokubuya ekhaya.
USieXsein Global uzalwe enhlanganweni yamazwe omhlaba yethimba lochwepheshe elinomlando omude emikhakheni efana nezempilo, ezemvelo, ezobuchwepheshe nezimboni. Inhloso enkulu nobungoti ukukhiqiza izikhala ezivikelwe, ngohlelo lokusebenza olukhiqiza amazinga wokusebenza afinyelela kuma-99,99% ekulawuleni amagciwane abekiwe (njenge-COVID-19). Ukuhlanganiswa kwemigomo eyisisekelo ye-4 eqenjini lentuthuko; ukuvimbela igciwane, ukunqanda, ukunciphisa, nokuqapha, kunikeza isilinganiso sempumelelo esingu-99,9% kunoma iyiphi inhlangano noma umphakathi ofuna ukusebenzisa ubuchwepheshe.
njengoba Ngokungafani nesilingo seSala Apolo, ikhonsathi ezayo yeSant Jordi ayithathwa njengesivivinyo somtholampilo, kepha kunalokho umcimbi "wezentengiselwano" kwazise abagqugquzeli sebevele baqinisekile ngokuphepha kwayo. Ngaphezu kwalokho, abahamba emakhonsathini bazoba Uthando lwabalandeli bamaLesbian esikhundleni samavolontiya futhi ngeke bavivinywe ngemuva komcimbi okwamanje sixoxisana ngokubambisana neSieXsein Global kanye nohulumeni emhlabeni wonke ngokuthuthuka nokuvulwa kabusha kwezindawo zasebusuku emhlabeni wonke ezithola impendulo enhle ngenxa ukwehluka kohlelo oluphakanyiswayo.
UCarmen Alvarez, isikhulu esiphezulu se-SieXsein Global ubeshilo, "Yithi kuphela inkampani ephumelele ukuhlanganisa nokunikeza ubuchwepheshe bamuva kanye nobuchwepheshe obuphansi kakhulu obuphikisana ne-COVID-19 kusisombululo esisodwa, kokubili eSpain nakwamanye amazwe".
Ngakolunye uhlangothi, uJoaquim Boadas, uNobhala Jikelele we I-International Nightlife Association sishilo, ”Ukulinda umhlambi ungathetheleleki, ngoba amabhizinisi amaningi asebusuku azobe engahambi ngaleso sikhathi. Yingakho sigcizelela ukusebenzisana kukahulumeni ukuze kufakazelwe ukuthi ngezinyathelo ezifanele, izindawo zingavuleka ngendlela ephephile ”.
Ukuhlolwa kwe-Pilot, ithuluzi elidingekayo lekusasa lomkhakha
Imboni yasebusuku ingaba yisixazululo kulo bhubhane lwamanje ngoba kungaba ngumthombo oyinhloko wokuthola ngokuhlanganyela neziphathimandla ezilawulayo futhi basebenze njengezicishamlilo zokuvikela ukusabalala kwegciwane. Ukuba nokuhlolwa kwe-COVID ukufinyelela izindawo zasebusuku nakho kungathola ingxenye enkulu yabantu ukuthi ihlolwe uma kungenjalo. Sisekela noma yiluphi uvivinyo olwenziwa ezindaweni nokuthola izixazululo ezingcono kakhulu zokuvuselela nezimboni ezivaliwe ngokuphelele kulo nyaka odlule.
Abezindaba bebelokhu benanela izivivinyo eziningi esezivele zenziwe ezindaweni ezinjenge-Amsterdam, lapho abantu abangu-1,300 XNUMX bebehambele umcimbi womculo eZiggo Dome eklanyelwe ukuhlola ubungozi bokuvulwa kabusha kwezindawo nokuhlelela ukwehliswa kwemingcele ebekiwe. Indawo uSala Apolo, eBarcelona nokungangenwa kwayo ngabahlanganyeli esivivinyweni somshayeli esenziwe kulo Disemba odlule.
Ngaphezu kwalokho, kuleli sonto uhulumeni waseCatalan nabahleli bemikhosi bamemezele ikhonsathi yokushayela izindiza eParl Sant Jordi eBarcelona ngoMashi 27. Abazobe behambele umhlangano kuzofanele benze isivivinyo esisheshayo futhi bahlolwe kwesinye sezikhala ezintathu, kungaba iSala Apolo, iLuz de Gas noma amahholo ekhonsathi eRazzmatazz. Labo abahlola ukuthi bane-negative bazokwazi ukubamba iqhaza kulo mcimbi ngesifihla-buso se-FFP2, kepha akukho ukuqedwa kwezenhlalo okuzodingeka.
Le ndawo, nokho, izohlukaniswa izikhala ezine indawo ngayinye ibamba abantu abangu-1,800 5,000 futhi kuzoba nemizamo eyenziwe ukugwema ukuminyana emnyango nasekuphumeni. Izokwamukela izethameli zabantu abangu-XNUMX XNUMX (abemile), ngokuhlolwa kwe-antigen kubo bonke abazobe bekhona kodwa kungekho ukuqhela komphakathi.
Ngokungafani nesilingo seSala Apolo, ikhonsathi ezayo yeSant Jordi ayithathwa njengesivivinyo somtholampilo, kepha kunalokho umcimbi "wezentengiselwano" kwazise abagqugquzeli sebevele baqinisekile ngokuphepha kwayo. Ngaphezu kwalokho, abahamba amakhonsathi bazoba yiLove of fans Lesbian esikhundleni samavolontiya futhi ngeke bahlolwe ngemuva komcimbi.